एक ग्रेट ब्रिटेन को सबै भन्दा सुन्दर सहर को - केन्ट। यो "इङ्गल्याण्ड को बगैचा" भनिन्छ। यसलाई पर्यटक धेरै यो सुन्दर क्षेत्र भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ यो तुलना छ। र तुरुन्तै मन आँखा अघि, महल र fortifications, ग्रामीण चर्च, आदि को देहाती चित्रहरू, राम्रो-groomed क्षेत्रहरू र सडक को समतल स्ट्रिप्स, बगैचा, Meadows र सुन्दर हवेली, turrets को उठ्नेछ तथापि, मात्र होइन प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकहरु, तर पनि Canterbury, डोभर, रोचेस्टर र अरूलाई जस्तै जस्तै प्राचीन शहर पाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न ऐतिहासिक आकर्षण आकर्षित।
केन्ट (Merevors, उदाहरणका लागि) मा गाउँमा पनि पर्यटन को standpoint देखि धेरै रोचक छ। यसलाई केही सडक पुरातन रोमी को समयमा यहाँ राखिएको थिए छ। साइडर - खैर, केन्ट स्याउ रक्सी को सबै भन्दा ठूलो निर्माता छ।
Kent (इङ्गल्याण्ड) अंग्रेजी च्यानल को किनारा मा देश को दक्षिणपूर्वी भाग मा स्थित छ। आज, उहाँले लन्डन को सुत्ने क्षेत्र को भाग हो। काउंटी को राजधानी Maidstone शहर तथापि, यसको संरचना Medway एकात्मक एकाइ को स्थिति छ मा छ। Kent यो दृश्य, यसको इतिहास मा काउन्टी धेरै पटक को बासिन्दा, युद्ध को थिएटर मा आफूलाई फेला, राजधानी र महाद्वीपीय युरोप बीच स्थित छ। ब्रिटेन युद्ध (दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा) यसको क्षेत्र थियो पछिल्लो समय। विशेष प्रभावित पूर्व केन्ट, त्यसपछि रूपमा ज्ञात भयो जो "को नरकको आगोजस्ता को थूथन।" डोभर सेतो ढुंगाको काउन्टी को प्रतीक मानिन्छ, र इङ्गल्याण्ड को सारा। तसर्थ, राम्रो मौसम मा तपाईं फ्रान्स को तटीय क्षेत्र, कलैस को विशेष मा शहर देख्न सक्छौं।
यसलाई सधैं त काउन्टी भनिन्छ? Kent (Kentus) एक ब्रेटन मूल छ र "सीमा", "विदेश" हो। सबै पछि, Strait आसन्न काउंटी को पूर्वी भाग र, पाठ्यक्रम, देश को एक सीमा क्षेत्र छ। यो कथा पनि प्रमाण छ कि पहिलो शताब्दी ई.पू. मा अर्थ, जो Yuliy Tsezar थोक Cantium यो क्षेत्र, - "यो जन्म ठाउ Kantiatsiev"। त्यसैले तिनीहरू 8 औं शताब्दीमा बोलाइएका थिए, र त्यसपछि, अब, क्षेत्र केन्ट को नाम प्राप्त।
ऐतिहासिक डेटा अनुसार, केन्ट को Paleolithic र Medway megaliths निर्माण थिए नदीको क्षेत्र मा Neolithic अवधिमा कब्जा गरिएको छ। रोमी पेशा को दिन खाली छैन भूमि गर्छन्। यो पुरातात्त्विक भेट्टाउनेछन् द्वारा प्रमाणित छ। 597 मा, पोप ग्रेगरी म, ब्रिटिश क्याथोलिक विश्वास इलाका विस्तार गर्ने निर्णय, अगस्टिनको पहिलो आर्कबिशप नियुक्त। र, बारी मा, ख्रीष्टियन गर्न राजा Etelbereta (अन्यजातिका) आकर्षित। त्यतिबेलादेखि Canterbury को Diocese ब्रिटेन मा एक मसीही केन्द्र हो।
को केन्ट पहिलो लन्डन आइपुग्दा र सडक द्वारा त्यहाँबाट अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने पर्यटक सबैभन्दा शहर को योजना मार्गहरू मध्ये आइपुग्छन्। यात्रा लगभग एक घण्टा लाग्छ। निस्सन्देह, कार द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न सबैभन्दा छिटो तरिका हो। राजधानी र काउन्टी बीच रूपमा यदि तपाईं रेल जान बाटो कार द्वारा र एक घण्टा बारेमा 25-30 मिनेट हुनेछ, मात्र 50 किमी छ।
एक पटक केन्ट छिमेकी गालमा देखि द्वीप गर्न रवाना गर्ने बेल्जियम को कुल, कब्जा भएको थियो। तथापि, जानु अगाडि, तिनीहरूले माटोको छाप्राहरू, विभिन्न लडाई fortifications, पत्थर सर्कल आदि धेरै निर्माण थियो को सेना Yuliya Tsezarya - त्यसपछि जमीन केन्ट रोमन legionaries मा उतरा। तिनीहरूले कब्जा क्षेत्रहरूमा सुसज्जित निर्णय, सडक, किला, विला र शहर निर्माण गर्न थाले।
Archaeologists माटो, ग्लास र कांस्य माल, सुन्दर आभूषण संग नेतृत्व coffins को एक ठूलो रकम पाएका छन्। तथापि, रोमी यहाँ एक लामो समय को लागि रहन थिएन, तिनीहरूले नम जलवायु र लगातार fogs धक्का। यस द्वीप एंग्लो-Saxon कुल तिनीहरूलाई पछि आए गर्नेहरूलाई यहाँ राज्य स्थापित। मसीही मिशन संग ब्रिटेन अर्को आर्कबिशप अगस्टिनको, Canterbury को Diocese रवाना र देशमा क्रिश्चियन धर्म को केन्द्र भयो। को Normans, फ्रेन्च र डच विरुद्ध सुरक्षा गर्न erected थिए कि काउन्टी संरक्षित fortifications को क्षेत्र मा।
Canterbury - मा सबैभन्दा पुरानो शहर काउंटी। पहिलो पटक यो 597 मा उल्लेख गरिएको थियो। पहिले नै उल्लेख रूपमा यहाँ Canterbury को आर्कबिशप को कुर्सी छ। शहर धेरै आकर्षण छ। तिनीहरूलाई बीच मुख्य - Canterbury गिरजाघर, को 7th शताब्दीमा गोथिक शैली मा बनाइएको थियो जो। खैर, यो संसारको सांस्कृतिक सम्पदाको एक कृति रूपमा यूनेस्को सूचीमा समावेश गरिएको छ। यो गिर्जाघर कि यहाँ तथ्यलाई सेन्ट Dunstan को अवशेषहरूको लागि प्रसिद्ध छ।
अर्को आकर्षण मात्र भग्नावशेष र 6th शताब्दीमा केन्ट को सेन्ट Bertha द्वारा स्थापित भएको थियो जो सेन्ट मार्टिन को चर्च, छोडेर तथापि, सेन्ट अगस्टिनको को Abbey छ।
डोभर शहर एक बंदरगाह रूपमा चिनिन्छ। यो रोमी द्वारा स्थापित भएको थियो। शहर सुन्दर महल, तटीय चट्टानहरु मा निर्मित छ र "इङ्गल्याण्ड गर्न कुञ्जी" भनिन्छ। यो डोभर को मुख्य आकर्षण हो। आज यहाँ स्थित एक ऐतिहासिक संग्रहालय छ। महल नजिकै Towering चट्टानको एक अचम्मलाग्दा सेतो रंग, उनि किनारा गर्न दृष्टिकोण को नाभिकहरु लागि संकेत हो अल्बियन को।
रोचेस्टर पनि आकर्षण, को गिर्जाघर र महल सहित भरिएको छ। पहिलो भवन रोमी साम्राज्यको युग बनेको भए तापनि यो शहर, अघिल्लो दुई भन्दा मुनिका छ। शक्तिशाली रोचेस्टर महल मुख्य नदी Medway काउन्टी को बैंकहरू मा खडा। उहाँले लन्डन बाटो मा एक रक्षात्मक Bastion छ।
कहिलेकाहीं पर्यटकहरु Harley टाउन (केन्ट) बेलायत मा देख रहे। तथापि, यस्तो बन्दोबस्त सबै यहाँ थियो। शायद पर्यटकहरु अष्ट्रेलिया मा केन्ट को नै काउन्टी, मेलबोर्न नजिकै, स्थित छ जो शहर, यसलाई भ्रममा। पक्कै पनि ब्रिटिश settlers पुरानो दिनमा त्यसैले यो बन्दोबस्त नाम निर्णय गरे।
पानी पार्क (कीव): विवरण, समुद्र तट र मनोरञ्जन
किन जनवरी मा Eilat आउन
जनवरी मा फुकेत एक यात्रा: छुट्टी समीक्षामा
शिशुहरू लागि शिशु सूत्र। विकल्प को आधारभूत र सबैभन्दा लोकप्रिय सूची
प्रयोगको लागि लाभ, समीक्षा र सिफारिसहरू
एउटा विश्लेषण: "Lay"। "Lay": सारांश
को छुटेका मध्य को व्यवस्था - तर्क को एक आधारभूत सिद्धान्त
पीटर द ग्रेटको शासनबाट आजसम्म पेट्रोफको इतिहास
कसरी पुरानो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ एयरसफ्ट - आवश्यकताहरु र प्राधिकरण